४ भदौ, काठमाडौँ । पछिल्लो एक महीनादेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा आज फेरि वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५०० अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा परेको हो । चीन–अमेरिका व्यापार टकराव, इरान–अमेरिका विवादले पनि सुनको भाउ बढाउन सहयोग गरेको बताइन्छ ।
सुनको मूल्य वृद्धि भएसँगै सुनको खपत भने ह्वात्तै घटेको छ । दैनिक २०÷२५ किलो सुन खपत हुने नेपाली बजारमा पछिल्लो समय मुस्किलले १० किलो पनि बिक्री हुन नसकेको महसङ्घले जनाएको छ । अहिले सुन किन्नेभन्दा पनि गहना बेच्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । (रासस)
१२ फागुन, काठमाडौं । सेयर कारोबार नेप्से आज झिनो अंकले…
सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च, हेर्नुहोस् कति पुग्यो प्रतितोला ?
१२ फागुन, काठमाडौँ । केहि दिनदेखि यता सुनको मुल्य निरन्तर…
कति छ त आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन घट्यो कुन बढ्यो ?
सेयर बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड, एकै दिनमा ३ अर्ब ६० करोडको कारोवार
सेयर बजार सर्किट ब्रेकरको अबस्थामा, एकै पटक ५ प्रतिशतकोे झट्का ।
सूनको भाउ अहिले सम्मकै उच्च, यो साता ८० हजार पुग्न सक्ने अनुमान